vol ။ 14 နိုဝငျဘာ, 1911 ။ အမှတ် 2
“ ၀ င်ပါ၊ အံ့သြစရာကောင်းလိုက်တာ!
မျှော်လင့်ပါတယ်ထဲသို့ဝင်။ သူမ၏အကြောင်းကိုလေထုသည်ပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောနှင့်ကောင်းကင်သို့မသိခင်ဝမ်းမြောက်သွားသည်။ သူမတွင်လှပသောဂုဏ်ပုဒ်သည်ထင်ရှားပေါ်လွင်နေပြီးသရဖူကိုဆုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့သည်၊ တန်ခိုးက၎င်း၏ရာဇလှံတံကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်၊ မသေနိုင်သောလူစုလူဝေးကိုကြည့်။ သူနှစ်သက်သောအရာအားလုံးကိုမြင်တွေ့နိုင်သည်။ Supernal light သည်မျှော်လင့်ခြင်းမျက်စိမှထုတ်ပေးသည်။ သူမသည်အားလုံးအပေါ်ရှားပါးသောအမွှေးအကြိုင်ကိုမှုတ်။ သူ၏အမူအယာများသည်ဘဝ၏ဒီရေကိုရွှင်လန်းစွာစည်းချက်ညီညီမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီးအလှတရားများစွာကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ သူမရဲ့အသံကအာရုံကြောတွေကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်၊ အာရုံတွေကိုပိုချိလာတယ်။ နှလုံးသားကိုရွှင်လန်းစေတယ်၊ ​​စကားလုံးအသစ်တွေကိုစွမ်းအင်အသစ်ပေးတယ်။
“ ငါ, မျှော်လင့်ခြင်းကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်၊ မင်းရဲ့ဖခင်ကမွေးဖွားခဲ့တယ်၊ Desire, Underworld မိဖုရားနှင့်စကြာ ၀ ofာ၏အလယ်ပိုင်းဒေသများမှအုပ်စိုးသူဖြစ်သည်။ ငါ့ကိုမသေနိုင်သောမိဘကဤသို့ခေါ်တော်မူခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်မတည်ရှိသေးသောမိဘမဲ့သည့်သူ ဖြစ်၍ အလုံးစုံတို့၏ဖခင်အနေနှင့်ထာဝရဖြစ်သည်။
စကြဝuniverseာကိုပconိသန္ဓေတည်သောအခါဖန်ဆင်းရှင်အားကျွန်ုပ်တိုးတိုးပြောလိုက်သည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးကြက်ဥ၏ပေါက်ဖွားမှုတွင်ကျွန်ုပ်သည်ရောဂါပိုးကို ၀ မ်းမြောက်စွာခံစားနိုင်ပြီး ၄ င်း၏သက်ရှိစွမ်းအင်ကိုနိုးထလာသည်။ ကမ္ဘာ၏ကိုယ်ဟန်အမူအရာနှင့်ပုံစံဒီဇိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဘဝ၏အတိုင်းအတာများကိုသီဆိုခဲ့ပြီးသူတို့၏ရင်သွေးငယ်များကိုပုံစံများအဖြစ်သို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ မြူဆိုင်းသောသဘာဝအရောင်များဖြင့်သတ္တဝါများမွေးဖွားချိန်တွင်သူတို့၏သခင်၏နာမကိုငါသခင့်ရှေ့တော်တွင်သုတ်သင်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာမြေသားများနှင့်အတူကျွန်ုပ်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပြီး ၀ မ်းသာခြင်း၏အံ့ဖွယ်အမှုများနှင့်သူတို့၏ဂုဏ်ရည်တော်များကိုဝမ်းမြောက်စွာခံစားခဲ့ရသည်။ သို့သော်သူသည်ထိုသူကိုမသိခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကောင်းကင်သို့တောက်ပသောလမ်းကိုပြသခဲ့ပြီးလမ်း၏နောက်ကြောင်းကိုစစ်ဆေးသည်။ သို့သော်သူတို့၏မျက်လုံးများသည်ကျွန်ုပ်၏အလင်းကိုနားမလည်နိုင်၊ သူတို့၏နားများသည်ကျွန်ုပ်၏အသံနှင့်မကိုက်ညီပါ။ နှလုံးသားသည်အချည်းနှီးသောယဇ်ပလ္လင်များဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူတို့မသိသောသူများနှင့်မမြင်နိုင်သောအရာများဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့သည်အတွေးအခေါ်အားဖြင့်ရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်းမရရှိဘဲ၎င်းတို့ကိုသူတို့ခေါ်ခဲ့သည့်အချည်းနှီးသို့ရောက်သွားလိမ့်မည်။
“ ငါ့ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြသူတွေဟာကျွန်မကိုဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ ကောင်းကင်သားတို့၊ ငါ၌အရာခပ်သိမ်းကိုငါမြင်၏။ ငါနှင့်အတူသင်သည်သင်၏ကောင်းကင်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်၏ရွှေတံဆိပ်ဆုများထက် ကျော်လွန်၍ မြင့်မား။ မရသေးသောမြင့်မားသောနေရာများသို့တက်လှမ်းနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၌လှည့်စားမခံပါနှင့်၊ သို့မဟုတ်ပါကသင်သည်သင်၏စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိတ်ပျက်အားငယ်ခြင်းနှင့်ငရဲ၏နိမ့်ကျသောနစ်မြုပ်မှုထဲသို့ကျသွားနိုင်သည်။ သို့သျောလညျး, ငရဲ၌ရှိလျှင်, ကောင်းကင်ဘုံ၌၎င်း, သို့မဟုတ်ကျော်လွန်။ , သင်အလိုတော်ရှိလျှင်ငါနှင့်အတူရှိပါလိမ့်မယ်။
“ ထင်ရှားတဲ့ကမ္ဘာမှာကျွန်တော့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကသတ္တဝါအားလုံးကိုမတွေ့မြင်နိုင်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးဖို့ပဲ။ ကျွန်ုပ်သည်သေခြင်းမဲ့သူဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ပုံစံများသည်သေလိမ့်မည်။ နိမ့်ကျသောလောကတွင်ကျွန်ုပ်ကိုနာမည်များစွာဖြင့်ခေါ်ဝေါ်ကြလိမ့်မည်။ ဥာဏ်တိမ်သောသူတို့သည်ငါ့ကိုသိရကြလိမ့်မည်။ သင်ယူသူသည်ကျွန်ုပ်ကိုထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေသောအသံထွက်နှင့်ရှောင်ရန်ကျွန်ုပ်အားပြစ်တင်ရှုတ်ချလိမ့်မည်။ ငါ၌ထင်ရှားသောနိမိတ်လက္ခဏာကိုမပြသောသူအားနိမ့်သောနိမ့်သောအရပ်တို့၌ငါနေမည်။
ဤသို့ဖြင့်ဘုရားများကိုစကားပြောပြီးနောက်မျှော်လင့်ချက်ခဏရပ်သည်။ ထိုသူတို့ကသူမ၏ညွှန်ကြားချက်ကိုနားမထောင်, တ ဦး တည်းအဖြစ်ထ။
“ လာကြတယ်၊ အလိုချင်ဆုံးလူဖြစ်ရမယ်” ​​ဟုတစ်ယောက်ချင်းစီက“ မင်းကိုငါကိုယ်တိုင်လို့ပြောတယ်။ ”
"စောင့်ပါ" ဟုမျှော်လင့်ကဆိုသည်။ "အိုး, ဖန်ဆင်းရှင်၏သား! ကောင်းကင်အမွေခံ၊ အကြင်သူသည်လူတို့ရှေ့မှာငါကိုငြင်းပယ်အံ့။ သိပ်မြန်မြန်မနေပါနဲ့ သင်၏ရွေးချယ်မှုတွင် `ကိုးကွယ်ရာအရှင် Reason Reason Reason Reason Reason Reason by by by by by Reason Reason Reason Reason Reason Reason Reason Reason Reason Reason Reason Reason Reason Reason Reason Reason Reason Reason Reason Reason Reason Reason Reason ကျွန်ုပ်ကိုကမ်းလှမ်းသောအကြောင်းပြချက်ကကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဟုရှုမြင်ပါ။ ငါနေသည့်ပုံစံများအတွက်ငါ့ကိုမမှားပါစေနှင့်။ ကမ္ဘာလောကကြီးသို့လှည့်လည်သွားလာရန်သင့်အားကျွန်ုပ်စိတ်ပျက်အားလျော့နေပါလိမ့်မည်။ သင်သည်ကျွန်ုပ်ကိုသန့်ရှင်းသောအလင်းရောင်မှပြန်လာပြီးပြန်မလာမှီတိုင်အောင်ရွေးနုတ်ခြင်းကိုခံရမည် ဖြစ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်၏နောက်သို့ လိုက်၍ ကမ္ဘာမြေ၌ရွှင်လန်းမှုနှင့်ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုဖြင့်လျှောက်လှမ်းရန်မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်လိမ့်မည်။ ငါနဲ့အတူကောင်းကင်သွားမယ် '
“ အသိပညာ၊ ကောင်းမြတ်ခြင်း၊ သေခြင်းတရား၊ သို့ရာတွင်ငါ၏အသံကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်လည်းနားလည်ရကြမည်။ သူတို့သည်အစားငါ့ကိုသူတို့၏နှလုံးသားဘာသာစကားသို့ပြန်ဆိုကြလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တွင်လောကစည်းစိမ်၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ ကျော်ကြားမှု၊ ချစ်ခြင်း၊ သို့ရာတွင်၊ သူတို့အလိုကိုပြည့်စုံစေမည်။ အဲဒါတွေကိုရယူပြီးသူတို့ရှာတဲ့အရာကိုမတွေ့နိုင်အောင်အမြဲတမ်းရုန်းကန်နေရလိမ့်မယ်။ သူတို့ကျရှုံးတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ထပ်ကျဆုံးပြီလို့ထင်ရရင်ငါပြောမယ်၊ သူတို့ကလည်းငါ့အသံကိုနားထောင်ပြီးပြန်စရှာကြမယ်။ ထို့အပြင်သူတို့သည်ကျွန်ုပ်ရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှာဖွေ။ ကျွန်ုပ်ကိုမရှာမှီတိုင်အောင်ကြိုးစား။ ရှာဖွေကြလိမ့်မည်။
မသေနိုင်အောင်ပညာရှိကြလော့။ သတိထားပါ၊ သို့မဟုတ်သင်မသိရသေးသောကျွန်ုပ်၏အမြွှာညီမဖြစ်သောကြောက်စိတ်ကိုသင်စိတ် ၀ င်စားလိမ့်မည်။ သူမရှိနေသောကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအကြည့်တွင်သူသည်ကျွန်ုပ်ကိုသင်၏အကြည့် မှနေ၍ ဖုံးကွယ်ထားသကဲ့သို့သင်၏နှလုံးသားများကိုလည်းဖြုန်းတီးပစ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
“ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ဟောပြောပြီ။ ချစ်ပါ ငါ့ကိုမမေ့နဲ့။ အကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုလျှောက်လျှင်၊
အလိုဆန္ဒနတ်ဘုရားများတွင်နိုး။ မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုမှတစ်ခုစီသည်သူ၏နိုးကြားလိုသောဆန္ဒ မှလွဲ၍ အခြားအရာတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်ဆန့်ကျင်။ ဆုချီးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်အလွန်အံ့အားသင့်သွားကြသည်။
တစ် ဦး ချင်းစီသည်မျှော်လင့်ချက်ကိုဆွဲဆောင်ရန်ရဲရင့်စွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူ၏ဆုကိုရယူခဲ့သည်ဟုထင်ရသော်လည်းမျှော်လင့်ချက်ကထွက်ပြေးခဲ့သည်။ ကောင်းကင်အလင်းသည်မျှော်လင့်ချက်နှင့်အတူထွက်လာ၏။
“ ပုပ်စပ်လျက်နေလော့။ ပုံသဏ္notာန်မရှိသောအရိပ်မဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်သည်။
သေမင်း၏ငြိမ်သက်ခြင်းသည်အားလုံးအတွင်း၌ကျဆင်းခဲ့သည်။ ကမ္ဘာကြီးပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ကြောက်စရာကောင်းသောတီးတိုးစကားကြောင့်အာကာသတုန်ခါသွားသည်။ ထိုတိုးတိုးလေးက ၀ မ်းနည်းပူဆွေးမှုကိုညည်းညူနေသည်။ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးစုဆောင်းနေသည့် ၀ မ်းနည်းပူဆွေးမှုက ၀ မ်းနည်းပူဆွေးမှုနှင့်မဆုတ်မနစ်ဇွဲရှိသည့်ဝေဒနာခံစားနေရသောလူများကိုစိတ်ပျက်အားငယ်စွာငိုကြွေးခဲ့သည်။
ကြောက်ရွံ့ခြင်းက“ လာပါ။ မင်းမျှော်လင့်ချက်ကိုမောင်းထုတ်ပြီးငါ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်။ ကောင်းကင်ဘုံတံခါးအပြင်ဘက်မှာသင့်ကိုစောင့်နေတယ် မျှော်လင့်ချက်မရှာပါနဲ့ သူမသည်တစ် ဦး ခဏအလင်းပေမယ့်တစ် ဦး phosphorescent အလင်းရောင်။ သူမသည်စိတ်ဓာတ်ကိုထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေသောအိပ်မက်များကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်မြန်ဆန်စေပြီးသူမကိုနှစ်သက်သူများသည်ကျွန်ုပ်၏ကျွန်များဖြစ်လာသည်။ မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ပါ။ သင်၏အထီးကျန်နေသောကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဘုရား၊ တံခါးများကိုဖြတ်ကျော်။ ကျွန်ုပ်၏ကျွန်များဖြစ်ပါ။ မျှော်လင့်ချက်မဲ့သောရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုအာကာသထဲသို့ငါမောင်းနှင်သွားမည်။ သူမလက်ကိုဆန့ ်၍ သူမကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်သည်နှင့်အမျှသူမအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ငါ့ကိုကြည့်ပါ။ ကြောက်လန့်”
ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်သောဘုရားတို့သည်မြင်။ တုန်လှုပ်ကြ၏။ မြို့တံခါးအတွင်း၌ဗလာကျင်းနေသည်။ အပြင်ဘက်မှာမှောင်မိုက်နေပြီးကြောက်လန့်တုန်လှုပ်မှုကအာကာသထဲကိုရောက်သွားတယ်။ ကြယ်တစ်ပွင့်သည်တုန်လှုပ်သွားပြီးမျှော်လင့်ချက်မဲ့နေသောအသံသည်အမှောင်ထုမှတစ်ဆင့်ထွက်ပေါ်လာသည်။
မစိုးရိမ်နှင့်။ သူသည်အရိပ်ဖြစ်၏။ သငျသညျသူမ၏အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူကြလိမ့်မယ်ဆိုရင်သူမသငျသညျကိုထိခိုက်လို့မရပါဘူး။ သင်သည်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်သွားသောအခါသင်တို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်ရွေးနုတ်။ ကျွန်ုပ်ကိုတွေ့ပြီးကောင်းကင်သို့ပြန်ကြလိမ့်မည်။ ငါ့နောက်သို့ လိုက်၍ ငါဆင်ခြင်ပါရစေ။
Fear တောင်မှမျှော်လင့်ချက်ရဲ့အသံကိုနားထောင်ခဲ့တဲ့မသေနိုင်တဲ့အရာတွေကိုမတားဆီးနိုင်ဘူး။ သူတို့ကဆိုပါတယ်:
ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအမှောင်ကမ္ဘာများထဲမှလှည့်လည်သွားလာနေသောမသေနိုင်သည့်အစောပိုင်းကာလများ၌မြေကြီးပေါ်သို့ဆင်းသက်လာပြီးလူသေများနှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့ကြပြီးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ ပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူမျှော်လင့်ချက်ရှိခဲ့တယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကသူတို့ဟာဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကိုမေ့သွားကြတယ်။ မျှော်လင့်ချက်ကလွဲရင်သူတို့ဘယ်ကလာသလဲဆိုတာကိုမှတ်မိနေတယ်။
မျှော်လင့်ချက်သည်ငယ်ရွယ်စဉ်တွင်နှင်းဆီပန်းများပွင့်နေသောလမ်းကိုမြင်သူလူငယ်များ၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်ယိုယွင်းနေသည်။ ဟောင်းနွမ်းပြီးငြီးငွေ့နေသောမျှော်လင့်ခြင်းကိုမြေကြီးပေါ်တွင်ပြန်လည်ကြည့်ရှုသော်လည်းကြောက်စိတ်ရောက်လာသည်။ သူတို့သည်နှစ်များ၏အလေးချိန်နှင့်ကြင်နာမှုရှိသည့်မျှော်လင့်ချက်တို့ကိုခံစားရသည်။ ထို့နောက်သူတို့၏ကောင်းကင်ကိုလှည့်ကြည့်ကြသည်။ သို့သော်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်သူတို့သည်ကောင်းကင်ကိုမျှော်ကြည့်သောအခါကြောက်လန့်ခြင်းကတံခါးကိုကျော်။ သေခြင်းကိုမမြင်နိုင်ပါ။
ကြောက်စိတ်ဖြင့်မောင်းနှင်။ မသေနိုင်သောမြေသည်ကမ္ဘာမြေကိုမေ့လျော့။ လမ်းလျှောက်သွားသော်လည်းမျှော်လင့်ချက်သည်သူတို့နှင့်အတူရှိ၏။ တစ်နေ့နေ့တွင်စင်ကြယ်သောဘဝအသက်တာ၌တွေ့ရှိရသောအလင်း၌သူတို့သည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုဖယ်ရှားပြီးမျှော်လင့်ချက်ကိုရှာတွေ့ပြီးသူတို့နှင့်ကောင်းကင်ဘုံကိုသိကြလိမ့်မည်။